Real Madrid oo caawa garaacday Atletico Madrid, una soo gudubtay Semi Fiinaalaha | Dhacdo.com
Home Ciyaaraha Real Madrid oo caawa garaacday Atletico Madrid, una soo gudubtay Semi Fiinaalaha
Real Madrid oo caawa garaacday Atletico Madrid, una soo gudubtay Semi Fiinaalaha
Kooxda Real Madrid ayaa guul cidhiidhi ah garoonkeeda kaga gaadhay kooxda Atletico Madrid, waxayna Los Blancos guushan ku gaadhay gool uu dhamaadkii ciyaarta usaxiixay Javier Hernandez. Guushan ayaa Real Madrid ka caawisay inay u soo baxdo afar dhamaadka Champions Leaque, waxayna ku biirtay kooxdah Barcelona, Bayern Munich iyo Juventus.Kadib sideed kulan oo ay xili ciyaareedkan iska horyimaadeen Real Madrid iyo Atletico Madrid ayay ugu danbayn Real Madrid guusheedii ugu horaysay ka gaadhay kooxda Simeone.
Indho oo dhan ayaa ku soo jeeday Santiago Bernabeu iyada oo ay kooxaha ree Madrid ku kulmeen kulanka lugta labaad ee Champions Leaque-ga. Real Madrid ayaa kulanka lugta labaad ee Champions Leaque-ga wareegiisa sideed dhamaadka Bernabeu ku soo dhawaysay kooxda ay sida wayn u xifiltamaan ee Atletico Madrid.Jamaahiirta Real Madrid ayaa xili horeba dibada garoonka soo buux dhaafiyay iyaga oo baska kooxoodooda banaanka u dhaweeyay.
Kulankii lugta hore ee Calderon ayaa ku soo dhamaaday barbaro gool la’aan ah, waxayna kooxaha Real iyo Atletico udagaalamayeen sidii ay ugu soo bixi lahaayeen wareega afar dhamaadka horyaalka kooxaha Yurub ee Champions Leaque.
Atletico Madrid ayaan hal kulan xili ciyaareedkan wax guuldaro ah kala kulmin kooxda ay dariska yihiin isla markaaana ay martida u ahayd waxayna labada kooxoodba dadaalka ugu danbeeya ku bixiyeen sidii ay ugu soo bixi lahaayeen Semi-finalka Champions Leaque-ga.xaalada Bernabeu ayaa ahayd mid khaas ah.
Kulankan ayaa ahaa mid aad iyo aad u xiiso badan isla markaana aduunka oo dhan laga sugaayay. Waxaana lays waydiinayay kooxda u soo bixi doonta afar dhamaadka Champions Leaque-ga. Simeone ayaa war fiican ka helay gooldhaliyihiisa Mandzukic kaas oo ku bilawday shaxda Atletico Madrid wuxuuna safka weerarka kala ciyaarayay Griezmann. Kulankan ayaa ahaa mid ay labada kooxoodba si wayn ugu soo diyaar garoobeen.
Real Madrid ayaa ciyaarta ku bilaabatay qaab dardar fiican, waxayna markiiba bilawday inay weerar halis ah ku bilawday kooxda martida u ahayd ee Atletico Madrid. Atletico ayaa ciyaarta ku bilaabatay qaab difaac u badan iyaga oo marka ay kubbada helaan doonayay inay weerar deg deg ah ku qaadaan goolka Madrid.Javier Hernandez ayaa fursada ugu fiicnayd ee ugu horaysay Real Madrid ka qasaariyay isaga oo daqiiqadii 12 helay fursad uu goolka furitaanka ku dhalin kari lahaa laakiin xidiga ree Mexico ayaa kubbada goolka garab mariyay.
Real Madrid ayaa sii wada cadaadiska ay u haysay difaaca Atletico, waxaana sidoo kale fursado fiican helay Cristiano Ronaldo. Ronlado ayaa laga badbaadiyay kubbad laaga horta ahaa iyo waliba fursado kale oo uu goolka Atletico Madrid ku toogtay. Ronaldo ayaa daqiiqadii 13 aad helay fursad oo uu goolka Atletico banaan u ahaa laakiin kubbad uu lugta badix ku darbeeyay ayaa bartilmaameedkeeda seegtay.
Markii ay ciyaartu soo gaadhay 20 daqiiqo ayay Atletico Madrid cagaha garoonka la heshay , waxayna bilawday inay markeeda weerar ku qaado goolka uu waardiyaha ka hayay Casillas.Labada kooxood ayaana bilaabay inay markan khadka dhexe si fiican ugu dagaalamaaan.Atletico Madrid ayaa fursadeeda ugu fiican heshay daqiiqadii 29 aad markaas oo uu Jesus Gamez ku sigtay inuu goolka furitaanka udhaliyo Atletico laakiin Casillas ayaa fursad halis ahayd iska badbaadiyay.
Daqiiqadii 33 aad ayuu Ronlado soo tuurtay kubbad laaga xorta ah wuxuuna ka soo tuuray meel goolka Atletico u jirtay 35 yards, wuxuuna kubbada ku soo darbeeyay awood aad ubadan, laakiin goolhaye Oblak ayaa sameeyay badbaadin fiican, si uu ciyaarta gool la’aan ugu sii hayo.
Daqiiqadii 43 aad ayay Real Madrid heshay fursada ugu halista badnayd ee goolka loo fishay kadib markii uu Ronaldo kubbad kula soo baxay goolhayaha Atletico Madrid ee Oblak, laakiin markale ayuu goolhaye Oblak sameeyay badbaadin fantastik ah, wuxuuna kooxdiisa ka caawiyay inuu ka badbaadiyo fursad xaqiiqi ahayd.qaybtii hore ee ciyaarta ayaa lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah, waxayna labada kooxood gool iska dhalin waayeen 135 daqiiqo.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii danbe ee ciyaarta ayay markiiba Real Madrid heshay fursadeeda ugu horaysay, waxaana markale fursad gool loo fishay Real ka qasaariyay Javier Hernandez kaas oo kubbad cajiib ah oo uu ka helay Isco wax yar bita goolka umariyay.Laakiin Varane ayaa isaguna helay fursad cajiib ah markale Oblak ayaa markale goolka xaadir ku ahaa.
Ciyaarta ayaa noqotay mid sii adkaatay iyada oo fursaduhuna noqdeen kuwo dhib lagu sameeyo. Daqiiqadii 74 aad ayay dhibaato horlihi soo gaadhay kooxda martida ahayd ahayd ee Atletico Madrid kadib markii kaadhka cas laga siiy Arda Turan. Turan ayaa lugta ku taagay Ramos oo kubbad iska saarayay laakiin Ramos ayaa si xun uga jaawaabay celiyay qaladka yar ee uu Arda Turan ku galay taas oo keentay inuu garsooruhu siiyo kaadhka labaad sidaana uu kaadhka cas ku qaato sababto ah hore ayuu u qaatay kaadka digniinta ah ee hore. Sidoo kale Arda Turan ayay qalad ku ahayd inuu isku dayo qaladka noocan oo kale ah isaga oo kaadhka digniinta ah haystay.
Intaa wixii ka danbaysay ayay Atletico Madrid ku ciyaaraysay 10 ciyaartoy , waxayna Real Madrid siisay fursad ay weerar badan ku qaadaan.Daqiiqadii 80 aad ayuu markale Hernandez kooxdiisa ka qasaariyay fursad dahabi ahayd wuxuuna kubbada hormariyay goolka Atletico Madrid oo banaan ahaa.Ronaldo ayaan qaybtii danbe qaab ciyaareed fiican soo bandhigin wuxuuna u muuqday inuu jilibka lugta bixid ka dhutinayay, wuxuuna xanuunkan dareemay mar uu kubbad isku dayay inuu darbeeyo.
Ugu dambeen Real Madrid ayaa daqiiqadii 88 aad ee dhamaadkii ciyaarta heshay goolka qalbi jabiyay kooxda martida ahayd ee Atletico Madrid, waxaana goolka ay raadinayeen ciyaarta oo dhan udhaliyay javier Hernandez , wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Los Blancos waqti xili danbe hogaanka ciyaarta ugu qabatay.
Kubbad ay James Rodriguez iyo Cristiano Ronlado si fiican usoo ciyaareen ayuu Ronlado isaga oo sii dhacaya u sii dhiibtay Hernandez oo xerada ganaaxa Atletico kubbda ku sii sugayay, wuxuuna markan iska ilaaliyay inuu sameeyo qaladaad badan oo uu ciyaarta ka soo sameeyay, wuxuuna sidaa ku dhaliyay goolka ay Real Madrdi geedka dheer iyo ka gaabanba ay ufuushay. Real Madrid ayaa afar dhamaadka wajihi doonta mid ka mid ah saddexda kooxood ee Bayern Munich, Barcelona iyo Juventus oo ay iskugu soo hadheen wareega afar dhamaadka Champions Leaque-ga.